» सोलुखुम्बुमा जब आफ्नै बुवाले नै छोराछोरीलाई एसि¥ड प्र¥हार गरे! सोलुखुम्बुमा जब आफ्नै बुवाले नै छोराछोरीलाई एसि¥ड प्र¥हार गरे! – हाम्रो खबर
सोलुखुम्बुमा जब आफ्नै बुवाले नै छोराछोरीलाई एसि¥ड प्र¥हार गरे!
काठमाडौ । सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा आफ्नै बाबुले छोराछोरीमाथि एसि¥ड प्र¥हार गरि घा¥इते बनाएका छन्। सोलुदु¥धकुण्ड नगरपालिका–५ वसन्त बजारका करिब ५५ वर्षीय मोहन बराइलीले छोराछोरी माथि एसि’ड प्र’हार गरि घाइते बनाएको सोलुखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ।
सोमबार राति करिब ८.४० बजेको सम¥यमा मा¥दक पदार्थ से¥वन गरेका बराइलीले २५ वर्षीय छोरा र १६ वर्षीया छोरी माथि एसि’ड प्र’हार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले जानकारी दिए।
प्रहरीका अनुसार एसि¥ड प्र*हार गर्ने बराईलीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ भने छोरा र छोरीको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा उपचार भइरहेको छ। छोरीको अवस्था सामान्य रहेको तर छोराको अवस्था ग*म्भिर रहेको बताइएको छ।